99designs: Crowdsourcing Logo na Web Design
Ntughari ndi mmadu na 99designs
Edere m na nso nso a banyere ahụmịhe m crowdsourcing gị imewe. Ahụmahụ ahụ bụ ihe ziri ezi na m kwurịtara banyere ya Enweghị nkọwa ngagharị na mmegide saịtị dị ka ya. Site na nkwado nkwado, n'izu a ka m gbalịrị 99designs.
Ahụmahụ dị na 99designs yiri nnọọ na, akpọrọ m asị ya, ma dị mfe na obi ụtọ. Ekpebiri m ịkwụ ụgwọ maka ọhụrụ Twitter ndabere nke ka mma kwalitere ụlọ ọrụ m, blọọgụ m na ọrụ m. M kwụrụ $ 100 + ihe dị ka $ 50 na ụgwọ… opekempe na n'okpuru 99designs tụrụ aro ego.
Nke a bụ ntinye m họpụtara dị ka onye mmeri maka ndabere Twitter ọhụrụ m:
Onye edemede ahụ jiri nzụlite nke dị na saịtị ahụ na-enweghị akwụkwọ ahụaja na-akwụghị ụgwọ wee debe nkọwa m rịọrọ maka ya na ya. Na ntụziaka m, enwere m ike ịlele ma nye nzaghachi ziri ezi na nhazi ọ bụla na onye nrụpụta ọ bụla. Offọdụ n'ime ndị na-emepụta na-n'ezie na-… M n'ezie chere a obere ihe ọjọọ ọ bụghị ịzụta multiple aghụghọ!
Usoro maka 99designs na-ekpughe adịghị ike na ụlọ ọrụ ọdịnala eserese ọdịnala. Na 99designs, enwere m ike ịnweta nnyefe dịgasị iche iche dị elu yana oke ụfọdụ. si na igbe. Nke a bụ ihe mbu onye omenum m mere na 99designs ha wee merie! Onye omenkà ahụ weere ihe ọmụma m ma mepụta ndabere nke na-adịghị ka ụdị aghụghọ ndị ọzọ. Ọ dị ọhụrụ ma dịkwa ọcha - mana ọ ka dị elu.
Enwere ndị na-emepụta 51,000 na obodo 99designs na-ebugote usoro ọhụụ na saịtị ọ bụla 10 sekọnd. 99designs na-emeghe 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu na ụbọchị ọ bụla n'afọ. Ọ bụghị naanị ọrụ maka ndị folks na-enweghị ike imeli akụrụngwa, ma. 7designs mere atụmatụ maka Pastọ Rick Warren (Onye edemede nke Purpose Driven Life) maka mkpuchi nke akwụkwọ ya na-esote,
na Ọrụ SxSW T-Shirt Project na ọbụna Efere Network si van kechie imewe.
Ọ ga-esiri m ike ịhapụ ịhapụ ọrụ ndị a. M na-incredibly picky na-emepụta na m ezi ndị enyi (M na-atụ anya ka…) na ọtụtụ. Ihe na-atọ ha ụtọ na-atọkarị m ụtọ. Ọ bụ naanị na ọrụ ndị a na-enye m ọtụtụ nhọrọ m na-enweghị ike ị nweta site na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọdịnala na mmekọrịta.
Otu ihe m chọrọ 99designs mere kwere ka ndị omenkà ha kwalite onwe ha na ụlọ ọrụ ha na 99designs. Aghọtara m na m ga-enwe ohere ịhapụ ụgwọ 99designs ma ọ bụrụ na m nwere ike ịga ozugbo na onye na-ese ihe - mana nke ahụ abaghị uru nyere uru nke usoro. M ka ga-eji 99designs mgbe m chọrọ ịtụpụ ihe n'ebe ahụ ma nweta ụfọdụ echiche okike… mana ịkwalite onye na-ese ihe na saịtị ha ga-enye m ohere ịmepụta mmekọrịta na-aga n'ihu mgbe nke ahụ ka mma.
Tags: canon logonnyefe faịlụ buru ibuPythonRuby
Quark Na-akwalite Na-enye Ngwọta Ngwakọta maka Nchọpụta Mbipụta Azụmaahịa Gị
Nov 25, 2009 na 4:31 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ahụmịhe gị Douglas!
Dec 20, 2009 na 2:16 PM
Ejikwa m ihe ndabere a maka m Tumblr peeji nke. M hụrụ n'anya ịdị mfe na ịma mma nke nhazi a!